Ibali le-Ponchielli's Four Act Opera, iLa Gioconda
I-Amilcare ye-Four Act Act Opera
I- La Gioconda yase-Amilcare yasePippelli yaqala ngo- Ephreli 8, 1876, eTeatro alla Scala eMilan. Ngokukhawuleza waba ngumbutho omkhulu wamaTaliyane ngelixa izandi zikaVerdi zaziwa kakhulu. Ibali lwenzeka ngekhulu le-17 leminyaka yeVenice.
La Gioconda , Umthetho 1, Umlomo weNgonyama
UBarnaba, umhloli we-Inquisition, ubukele kwaye ukhangele iLa Gioconda ngexesha lokubhiyozelwa komkhosi kwiDgege yaseDorege ngelixa uhlanga lwe-regatta lwenzeka kwi-canal.
Njengoko iLa Gioconda ihambisa umama wayo oyimpumputhe, iLa Cieca, ngaphesheya kwesikwere sedolophu, uBarnaba uyamsondela ngokukhawuleza aze ambuze. U-La Gioconda wenqaba ukunyanzelisa kwakhe, ngoko utsho ngokukrakra ukuba unina ungumlumbi omdala owonakalisayo obangela umphumo ongaphantsi-omhle weentlanga. Iifoloji zedolophu ziyacatshulwa kalula, kwaye inomsindo, isixuku esinoyiko ngokukhawuleza. Ngombulelo, u-Enzo Grimaldo, umthetheli wolwandle osemtsha ogama likaLa Gioconda, uyakwazi ukunqumla isihlwele. Eli qela liye lagqithisa ukufika kuka-Alvise Badoero, intloko ye-Inquisition, kunye nomkakhe, uLaura. ULaura ubona ukuba iLa Cieca iyaphathwa kakubi, ngoko ke ngokumnene uyimzisa phantsi kwayo. Ekhuthazwa nguLaura uxabiso, uLa Cieca unikela uLaura wakhe rosary, into ayigugu kakhulu. UBarnaba ubukele ngombono onjenge-hawk kunye nezaziso into engaqhelekanga phakathi kukaLaura no-Enzo. Ngexesha elide ukhumbula ukuba ngaphambi kokuba uLaura ahlele umtshato ku-Alvise, wayekade ethanda kakhulu u-Enzo kwaye wayezibandakanya naye.
Xa ebona ukuba kusekho i-chemistry phakathi kwabo, uBarnaba uyaqiniseka ukuba unokubonisa ukungathembeki kuka-Enzo kuLa Gioconda ngamathemba okumbamba. Emva kokuba wonke umntu esuka kwisikwere, u-Enzo noBarnaba bahlala emva. UBarnaba uxelela u-Enzo ukuba unokunceda ukuhlanganisa abazithandayo. U-Enzo uvuma ukuba uLaura nguye kuphela isizathu sokuba abuyele eVenice.
Uthemba ukumthatha aze aphile ubomi obutsha kude naso. UBharnabhas umxelela ukuba unokulungiselela intlanganiso yangasese kunye noLaura kwi-ship ye-Enzo ngalobo busuku. Nangona eyazi ukuba injongo kaBarnaba yayingenakuqhelana neLa Gioconda, u-Enzo uyakhawuleza ukumvumela ukuba amise intlanganiso kunye noLaura, kwaye ngokukhawuleza ukhawuleza emkhombeni wakhe. UBarnaba, ngoku wedwa ukucinga ngesicwangciso sakhe esibi, ubiza umlobi ukuba acele incwadi kwi-Alvise. UBarnaba uyamxwayisa ukuba umfazi uceba ukuphunyuka kunye nengxaki yakhe yangaphambili. ULioconda uvale uBarnaba kwaye uyaphukile intliziyo ngento athethayo. UBarnaba unciphisa ileta kwiNgonyama yomlomo weNgonyama, isicatshulwa sokungcebeleka soNxibelelwano lweeNgcaciso.
La Gioconda , uMthetho 2, iRosari
Uguqulwe njengomdobi, uBarnaba ulungele ukuthatha uLaura kwisikhululo se-Enzo emkhombeni omncinci. U-Enzo ulindele ngokungapheli ukufika kukaLaura. Njengoko ekhangeleka phezulu, uhlabelela ubuhle besibhakabhaka nolwandle. UBarnaba ukhulula uLaura njengoko wathenjisiwe kwaye abathandi bakhe babini bayamkela ngentshiseko. UBarnaba uhamba nomntu obomile ebusweni bakhe. Injabulo kaLaura iya kuba yinto enzulu njengoko evakalelwa kukuba into ayilungile. Akathembi uBarnaba, kodwa u-Enzo uyamqinisekisa ukuba baya kuhamba ngokukhawuleza kwaye baqalise ubomi obutsha ndawonye.
Xa i-Enzo iphela phantsi kwebhokisi ukulungiselela ukuqala, i-La Gioconda iyahamba emthunzini nakwidonki. La Gioconda, ebambe imiphunga yamaphepha eLaura, kwaye bobabini balwa no-Enzo. Xa iLa Gioconda inesandla esiphambili, uqala ukunyakaza ngokukhawuleza ngekrele ukugwaza uLaura. Ngokukhawuleza, ubona uLaura enxinxathela i-rosary yonina. ULio Gioconda uphosa umsi kwaye uyatshintsha ngokukhawuleza intliziyo. ULioconda uyazi ukuba u-Alvise kunye namadoda akhe basendleleni yokumisa uLaura, ngoko unquma ukumnceda ukuba aphunyuke esebenzisa isikebhe esincinci uLaooconda esasetyenziselwa ukufikelela emkhombeni. Emva kokumthumelela, uLiococonda uhlala emva kwaye utshela u-Enzo ongaboniyo, ukuba uLaura uye wamshiya. Uzama ukumkholisa ukuba ahlale naye esikhundleni sakhe, kodwa uthando lwakhe ngoLaura lukhula luba namandla njalo ngomzuzu. Xa i-Alveve iqala ukutshisa iinqana e-nqanawa yakhe, u-Enzo ubeka iinqanawa zakhe ngomlilo aze aqhube elwandle.
La Gioconda , uMthetho we-3, i-Ca 'd'Oro
Emuva kwikhotwe leCa 'd'Oro, uLaura, obanjwe ngamadoda akwa-Alveve, udibana nomyeni wakhe. Emva kokuthembisa ukuba athathe ubomi bakhe ngenxa yokuba wamngcatsha, umyalela ukuba aphuze ubuthi obamlungiselele phambi kokuba abantu basezidolophini bephephe ingoma yabo ezitratweni ezingezantsi. Emva kokuba emshiye yedwa, uLiococonda uyangena egumbini, emva kokulandela uLaura kwakhona. Utshintshisa utyhefu ngesisombululo sokulala sokulinganisa ukufa kwaye uxele uLaura ukuba uya kumnceda abe ne-Enzo.
Kwibala lebhola, i-Alvise iveza ibhaltshi kwinani elikhulu leendwendwe emenywe kwibhotwe lakhe. UBarnaba kunye no-Enzo, bobabini baziguqula njengabahloniphekileyo, bathathe indawo yabo phakathi kwesihlwele. UBarnaba ugcina iLa Cieca emva kokumfumana ethandaza ngaphakathi kwebhotwe. Amaxesha adlula kwaye iingcingo zomngcwabo ziqala ukukhala. Njengoko iibhentshi ezingenakunqumlayo zihamba ngaphesheya kwidolophu, umqhubi omncinci uthwala umzimba kaLaura ngokusebenzisa ibhola lebhola. U-Enzo ulahlekelwa ngumntu kwaye uyamguqula, kunye namadoda akwa-Alveve amhlupha. ULioconda ukhawuleza waya eBharnaba kwaye unika ithuba lokuba naye xa nje encedisa ukusindisa i-Enzo kwi-Alvise. UBharnabhas uyavumelana nemigqaliselo yakhe kodwa ugcina iLa Cieca njengothunjwa.
La Gioconda , uMthetho we-4, i-Orfano Canal
Igumbi likaLa Gioconda kwinqaba yakhe ebhuqiweyo kwisiqithi, abahlobo bakaLa Gioconda bahamba noLaura abalalayo, abawafumanisa ethuneni lakhe lokungcwaba. Xa u-Enzo engeniswa, ekhutshiwe entolongweni ebulela kuBarnaba, uphazamiseka ngumzimba kaLaura ongenakuphila. Eqhutywe ngumsindo, uphantse ukubulala uLio Gionda ngenxa yento ayenzile.
Njengoko uthabatha umlenze ukugwaza u-La Gioconda, uLaura ugqiba ukuvusa ebuthongweni bakhe obunzima aze abize ku-Enzo. Xa ebona ukuba uLiococonda uncedise ukubuyisana kunye nabathandi bakhe ababini, uyambulela aze aphunyuke noLaura. I-La Gioconda ngoku kufuneka ijongane nengxaki yeBarnaba. Xa efika efuna ukuba azalisekise inxalenye yakhe yeengxoxo, ubeka ixesha ngokucula kunye nokuzibhinqa ngeentlobo zonke zobungcweti, ngelixa efihla ngasese intonga phantsi kweendyebo. Xa emnyanzela ukuba angenise kuye, uyazama ukumthatha. Ngomnye uhamba ngokukhawuleza, uLiococonda uyazigwaza waza wawa phantsi. UBarnaba, ububi engundoqo, uzama ukulimaza inxeba lokugqibela ukuya kuLa Gioconda ngokumxelela ukuba unqamle umama ebusuku, kodwa sele sele eswelekile kwaye akayi kumva.
Olunye uVuhlu oluPhambili lwama-opera
Strauss ' Elektra
UMoart's Magic Flute
I-Puccini ye- Madama Butterfly
"Il Dolce Suono" Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
I-elislin d'amore I-Synopsis
Isiqendu se-Opera Lohengrin
I-Adi yeVerdi: I-Synopsis
I-Leporello "Catalogue Aria" evela kwi-opera yaseMozart uDon Giovanni
I-Ballad ye-Baby Doe i-Synopsis
Idonga yaseDenisova - Ubungqina bokuba abantu baseDenisovan
Indlela yokuLahla iiFleas ekhaya lakho
Inkcazo kunye nemizekelo ye-Back Slang
Iindlela ezili-10 zokuthetha nokuqonda i-Rapid-Fire Italian
Dibana no-Archangel Barachiel, Ingelosi yeeNtsikelelo
Ukubambisana okuphezulu kwe-R & B-Rap
Amazwi anzima anokuqala 'A'
Ukuloba kakhulu kwiBhanki
Ama-insect amaHorrama amaHlathi ongasasaza kwi-Netflix
Oko kuthetha ukujika elinye ihlama
I-Aliphatic Compound Definition
Gaia, UkuBumbathiswa koMhlaba
Ingelosi Imizwa: Ngaba Iingelosi Zivakalelwa Usizi Nomsindo?
Iibhola kwi-Architecture - Igalari yezithombe
Iincwadi eziphakanyisiweyo eziphezulu kwi-Painting Painting